Sao mba misy tsy ampy ny mason-tsivana tany re e… ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Sao mba misy tsy ampy ny mason-tsivana tany re e… ?
Manoloana ny fanovana matetika ny mpikambana ao amin’ny goverinemanta nandritra ity fitondran’ny filoha andry Rajoelina ity dia mametra-panontaniana ny olon-tsotra maro ary an’isany i Jonah Ratimbazafy amin’ny maha olom-pirenana azy no ilazana fa olon-tsotra izy fa tsy manivaiva ny fahaizana akory. Arahao ary ny heviny.
FANOVANA MINISITRA AO AMIN’NY GOVERNEMANTA… SY TOMPON’ANDRAIKITRA AMBONY…
Rehefa mahita FANOVANA MATETIKA ny Minisitra (na koa PM tamin’ny fitondrana teo aloha) ireny ianao dia te hiteny foana hoe: ‘F’angaha tena tsisy olona natokisana sy mba efa fantatra mialoha fa ahavita ny asa tsara amin’ny andraikitra nanendrena azy tamin’ireo Malagasy 27 tapitrisa satria misy tena mampananontany tena mihitsy ny amin’ny hoe “F’angaha tena tsy nisy olona azo nofidina sy notendrena tamin’io toerana io mihitsy no io olona io no natao teo?”. Misy efa fantatra mialoha ny mombamomba ilay olona fa lasa toy ny kendan’ny vomanga nasesiky ny tanany ihany ilay Filoha nametraka ilay olona teo ka sasatra ny manova olona satria tsy nahitana fampandrosoaa izany mihitsy fa saika faharavana sy fahapotehana aza no navelany teo… »
Mpivady omena asa ambony saropady mifanitsaka…
Dia isika rehetra no samy diso Fanantenana ary meritreritra sy miandrandra foana ny tsaratsara kokoa isaky ny manova olona. Dia, toy izany foana no misy eto amin’ity firenena Malagasy ity. Matetika moa dia misy mpiaro matanjaka be koa ilay tompon’andraikitra ka tsy azo kitihina eo amin’ny toerany mihitsy fa ny mitanisa ny fahapotehana ataony sy ny vola manjavona tantaniny no fampiononana ho an’ilay vahoaka. Dia azo ambara fa fotoana very ny fitazomana olona efa hita fa tsy mahay ary ny fanovana lava satria ilay rafitra mihitsy fa tsy ny olona loatra ihany koa indraindray no efa tsy mahomby. Aiza ve dia misy mpivady na mpihavana akaiky no tendrena amin’ny toerana ambony saropady sy ny sia izay efa fantatr’ilay lehibe nanendry azy ireny teo fa tena tsy azo atao mihitsy.
Efa mba nisy ihany eritreritra taloha fa aleo olona voasivana sy notendren’ireny Corps ireny no atolotra amain’ny toerana mifandraika amin’ny traikefany sy afaka hanasazy iny olona iny no atao Minisitra na tompon’andraikitra ambony toerana iray. Ohatra: Ny Corps des Ingénieurs Agronome no mifidy olona sy manolotra izany ho Minisitry ny Fambolena sy fiompiana fa tsy olona atao sambo-dokotra etsy sy eroa satria mafana fo be fotsiny ao amin’ny antoko ohatra. Dia gaga ve ianao raha midona amin’ny rindrina ilay fitondrana ary sarotra amin’ny Filoha ny manala ilay olona satria raha ny hafanam-po amin’ny fisolelahana dia tena loha-laharana ilay ramose na ramatoa.
Tena ohatry ny midika tsy fahamatorana izany ilay izy na amboarimboarina toa inona aza ny voambolana politika, fa dia ilay vahoaka foana no mizaka ny vokany ary ny fiaraha-monina iainantsika no tsy milamina mihitsy fa saika fifanasana vangy foana. Dia aiza no hisy fitoniana sy fandrosoana izany azonao antenaina. Be dia be ny olana ankehitriny azo nosorohina fa atao akory f’efa izao aloha no zavamisy satria mbola averina foaa f’efa ilay rafitra mihitsy no tsy mety intsony amin’ny olona ka na mba mety misy ministra na tompon’andraikitra mba manana “bonne volonté” ihany aza dia efa saika tonga dia fandavana avy hatrany vokatr’ilay tsy fahatokisana intsony no asetrin’ny olona. Ary dia toy izany foana.
…Misy miala andaharana tsy lera
Efa fomba tsy mahagaga fanao eto Madagasikara moa ilay mijanona anaty fitondrana ao anatn’ny 4 taona ka rehefa ho tonga amin’ny taona farany dia miala amin’izay ary milaza fa mahita ny tsy mety rehetra ataon’ny fitondrana amin’izay. Fony tao izy hatramin’izay tsy niteniteny. Dia mirotsaka @ fifidiana ka rehefa tsy lany dia manohana izay mety ho lany amin’ireo mpifaninana 2è tour. Dia, mahazo toerana vitsivitsy minisitra satria zaraina ny toerana ho tambin’ny fanohanana. Dia, toy izany foana ny fomba fanao politika eto Madagasikara.
Indraindray aho te-hiteny fa toy ny misangisangy sy manao handrakandrana ary lalaon’ankizy ny fitantanana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Fa izay mitondra foana no tokony hanontany tena hoe “Fa maninona no tsy mety ho tonga amin’ilay fiarahana mavitrika hampandroso ny olompirenena ? Mety ve izao fitantanantsika izao sa lany andro mifampiaro amin’ny zavatra efa hita fa tsy mandeha ka hamoramoraina fotsiny amin’ny hoe Solidarité gouvernementale kanefa ilay vahoaka efa ho faty ka mifampiaro foana na amin’ny ratsy aza ! Tena mikapoka anie io Andriamanitra io ary mamaly ny mpanao ratsy e…